Njengakamuva, ngicabanga kakhulu ngokunikeza ngemibhalo ethe xaxa ngisho nokukhuluma esidlangalaleni kubhulogi. Kungani? I-Bloggin ayilula! Izinkampani ziyakubona lokhu… ukuzibeka 'nqunu' kuwebhu kungaba isu elihle noma kungenzeka lingabi isu elihle. Ngaphandle kwesu nokuqukethwe, noma kunjalo, ubuchwepheshe.
Ingane entsha ebhlokini ngu I-Vox. Ngabona izithombe-skrini ezithile zeVox ngokucindezela okuqukethwe (umsindo, ividiyo noma isithombe) kokuthunyelwe futhi ngahlabeka umxhwele ngendlela abakwenze ngayo kwaba lula ngayo. Kepha kulapho okuyekeka kalula khona.
Azikho izixhumanisi ezingaphansi kwezingu-30 ekhasini lami lebhulogi lezinto okufanele zenziwe. Bengimane ngifuna ukulayisha isithombe se-blog futhi ngilimaze ukudida isithombe sebhulogi sesithombe sephrofayili. Uma uzozenza ithuluzi elilandelayo “elilula” lokubhuloga, uqinisekile njengoba wenza kangcono ukwenza kube lula. Ayikho indlela engingacindezela ngayo umngane wami kuleli thuluzi. Kungcono ngikhulume nabo ngiphume WordPress or Blogger.
Mhlawumbe enye yezinkinga nge-Vox ukuthi ithonywe ama-blogger wokubloga. Uma ngabe i-SixApart beyifuna ngempela ukwenza ipulatifomu elula yokubhuloga, bekufanele ngabe bafuna abantu abangakaze babhulogi ngaphambili. Angiqiniseki ukuthi angakanani amanani wokutholwa okukhuphukela kuVox, kepha angingabazi ukuthi ayamangalisa.